मनोरञ्जन – Page 11 – erupse.com
कस्तो शैलीमा यौनसम्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिन्छन् ?
एजेन्सी । मानिसै पिच्छे फरक किसिमको यौन सम्पर्क शैली मन पर्न सक्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कुन मानिसले कस्तो शैलीको यौन आनन्द लिन्छ यो कुरा भन्न गाह्रो छ । तर, हालै एक सर्भेक्षणले रोचक कुरा बाहिर ल्याएको छ । केही दिनअघि एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणका क्रममा..
शनिबार, अशोज ६, २०७५ मा प्रकाशित
चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चलचित्रको ट्रेलरसँगै यसको प्रदर्शन मिति पनि तय गरिएको हो । यो चलचित्र अब दशैको पहिलो दिन घटस्थापनाबाट रिलिज हुने भएको छ । यो चलचित्रसँग जुध्ने भनेर प्रचार गरिएको चलचित्र ‘जय भोले’ भने फूलपातिबाट रिलिज..
दोस्रो विवाह गर्ने कलाकारहरूको भित्री कथा
अभिनेता अभिनेत्री सुस्मिता बम्जन (केसी)ले इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । उनले साउथ इन्डियन नागरिक किलन स्वामीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् । गत ९ सेप्टेम्बरमा इन्गेजमेन्ट गरेकी सुस्मिताले आउँदो भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर विवाह गर्ने भएकी छन् । सन् २००१ मा अभिनेता भुवन केसीसँग छुट्टिए पनि एक्लै रहँदै..
यी हिरोइनको सम्पत्ति ९० करोड
भारतीय अभिनेता अभिनेत्री तथा सेलिब्रेटीहरुको कमाइ निकै राम्रो रहेको छ । एक दुईवटा फिल्ममा सफता पाएसँगै उनीहरुको कमाइ ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । कम उमेरमै धेरै पैसा कमाउनेमा भारतीय फिल्म उद्योगका कलाकारहरु रहेका छन् । चल्तिका हिरो हिरोइन मात्र होइन कम चल्तीका हिरो हिरोइनको कमाइ पनि करोडौं रुपैयाँ..
केसीसँग डिभोर्स गरेकी अनमोलकी आमा सुस्मिताले स्वामीसँग विहे गर्ने
भुवन केसीसँग छुट्टिएर बसेकी अभिनेत्री सुस्मिता बम्जन (केसी)ले इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । सुस्मिताले अष्ट्रेलियाका धनाढ्य व्यापारी किलन स्वामीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् । गत ९ सेप्टेम्बरमा इन्गेजमेन्ट गरेकी सुस्मिताले आउँदो भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर विवाह गर्ने भएकी छन् । सुस्मिता भुवनसँग..
काठमाडाैं । हलिउडको एक्सन सिरिज ‘एक्स म्यान’ अभिनेत्री फान बिङ बिङ पछिल्लो दुई महिनादेखि बेपत्ता छिन् । चिनियाँ मिडियामा यो समाचार चर्चाको विषय बनिरहेको छ । अभिनेत्री फानले आफ्नो सोसल एकाउन्टमा अन्तिमपटक जुलाई २०१८ मा स्टाटस पोस्ट गरेकी थिइन् । फान बिङ बिङ चीनकी सबैभन्दा महँगी अभिनेत्री हुन्..
पार्टीमा पैसा लिएर नाच्छन् सलमानदेखि सोनाक्षीसम्म, कति लिन्छन् पैसा ?
आइतवार, भदौ १७, २०७५ मा प्रकाशित
बलिउडका चर्चित अभिनेता-अभिनेत्री फिल्ममा अभिनय मात्रै गर्दैनन् । ‘हाइ क्लास’ बिहे पार्टीमा नाच्ने पनि गर्छन् । यो लिस्टमा शाहरुख खान, सलमान खानदेखि सनी लियोन र सोनाक्षी सिन्हासम्म पर्छन् । उनीहरू बिहे पार्टीमा नाचेबापत महँगो शुल्क लिन्छन् । एउटा पार्टीमा नाचेबापत लिने पारिश्रमिक..
अनौठो रेस्टुराँ कुकुरहरू दिनदिनै गर्छन् पार्टी
बिहिबार, भदौ १४, २०७५ मा प्रकाशित
भारतको मुम्बईमा अँधेरीस्थित पेट्स इमोसन्स फूड एन्ड एभ्रिथिङ (पेफे) रेस्टुराँमा कुकुरहरूले रमाइलो गर्ने गरेका छन् । रेस्टुराँमा कुकुरका लागि विशेष पक्वान्न बनाइन्छ र उनीहरूले अन्य कुकुरका साथ समय बिताउन र खेल्न पनि पाउँछन् । रेस्टुराँ खासगरी कुकुरहरूका लागि नै बनाइएको हो । खाना खाने टेबलदेखि..
प्रेम र सम्भोग भूतसँग
एजेन्सी – सुन्दा अचम्म लाग्रन सक्छ । तर यो घटना सत्य हो । बेलायतमा एकजना महिला भूतसँग प्रेममा परेकी छन् । भूतको प्रेममा उनी यति फसेकी छन् कि भूतसँगको संसर्गबाट बच्चा जन्माउने उनको चाहना छ । एमथिस्ट रिल्म हो उनको नाम । आफू एउटा भूतसँग सिरियस रिलेसनशिपमा रहेको उनको दाबी छ । उनको प्रेमकहानी अनौठो छ । उनको..
जब आमिर खानले माधुरी दीक्षितको हातमा थुकिदिए
आमिर खान र माधुरी दीक्षितको जोडीलाई पर्दामा निकै मनपराइएको थियो । उनीहरुले धेरै फिल्ममा सँगै काम भने गरेका थिएनन् । फिल्म दिलमा दुबैको शानदार अभिनय देख्न पाइएको थियो र दीवाना मुझ सा नही दुबैले साथसाथ गरेको अन्तिम फिल्म थियो । फिल्म दिलको सुटिङका क्रममा आमिरले माधुरीका साथ एक यस्तो मजाक..